गुरु टोलिद्वारा अन्धा राजा क्षेत्रमा सरसफाइ कार्यक्रम सम्पन्न — Harpraharnews.com
९ असार २०७९, बिहीबार June 23, 2022 हरप्रहर न्यूज
सजन राई/दमक,९ असार । गुरु टोलिले धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल अन्धा राजा क्षेत्रमा सरसफाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
“वातावरण सफा राखौँ,आफू पनि स्वस्थ रहौँ” भन्ने नाराका साथ चुलाचुलि-५ मा रहेको उक्त क्षेत्रमा बुधवार सरसफाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । टोलिले शिखरकटेरि देखि धार्मिक स्थल सम्म पुग्ने मार्ग लगायत त्यस परिसरको फोहोर व्यवस्थापन गरेको थियो ।
“स्वस्थ नै धन हो त्यसैले हामी स्वस्थ हुनलाई वातावरण सफा रहनु पर्छ र वातावरण सफा राख्न हामीले फोहोर गर्नु हुदैन । हाम्रो उद्देश्य नै सफा देश हो ।” सरसफाइ कार्यक्रमका संयोजक तथा टोलिका सचिव आकाश लिम्बुले बताए ।
गूरू टोली सरसफाई पछि
त्यस्तै टोलिका महासचिव अरुन बुङछेन भन्छन “वातावरण सफा राख्न प्रत्येक व्यक्तिमा चेतना आउनु पर्छ अनि घर सफा हुन्छ । घर सफा हुनु भनेको समाज सफा हुनु हो । सबै समाज सफा रहे देश आफै सफा रहन्छ । त्यसैले अब प्रत्येक व्यक्तिमा सकारात्मक सोच आउन अत्यन्तै जरुरी रहेको छ ।”
सरसफाइ कार्यक्रम देखेर खुशि भएका स्थानीयहरुले यसरि सबैले सफा गरे यो ठाउँ अझ सुन्दर हुने र स्वच्छ हावा सँगै शुद्ध खाने पानी उपलब्ध हुने वताए ।
दमक देखि करिब ८ कि.मि. को दुरिमा रहेको यो ठाउँले पदमार्गको लागि सम्भावना बोकेको छ । सरसफाइ सँगै पदमार्गको पनि प्रचार हुने भएकोले समग्रमा यो क्षेत्रको विकास तथा प्रबर्द्धनको निम्ति यस्ता कार्यक्रमहरु हुन जरुरी रहेको छ ।
राम्रो योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई स्थानीय सरकारले पनि साथ दिएर सहयोग गर्नु पर्छ र यस्ता युवाहरुलाई सरकारले सम्मान गरे अन्य युवाहरुलाई पनि प्रेरणा हुनेछ ।
गुरू टोलिका सदस्यहरू
गुरु टोलि के हो ?
२०७८ मा झापाको दमकमा स्थापना भएको समूह हो । झापा पाँचथर इलाम र ताप्लेजुङका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशिल युवाहरुले मिलेर समाज सेवा गर्ने भावले सुरु गरेको थियो । विभिन्न क्षेत्रमा पीडित भएकाहरुको आवाज बन्दै गएको टोलिले आर्थिक अभाव भएका बिरामिहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आइरेको छ ।
गुरु टोलिको संस्थापक अध्यक्षमा विशाल देवान रहेका छन् ।
गुरु टोलि नाम कसरि रहन गयो ?
साथिभाईमा बोल्दा प्राय गरेर सम्मानित शब्द ‘गुरु’प्रयोग गरेको र गुरु भनिरहदा उमेरले सानो होस वा ठूलो छुट्याउनु नपर्ने हुनाले यहीँ नामलाई टोलिको नाम दिएको हो ।
४९ जनामा कोरोना भाइरस
One thought on “गुरु टोलिद्वारा अन्धा राजा क्षेत्रमा सरसफाइ कार्यक्रम सम्पन्न”
balchandra bantawa rai says:
Guru toli ko member mero respect guru haru Lai Naman 🙏🙏 tapai haru ko Kam parti ucha saman yasari nai aaghadi badhaunu hoss sadhai Mero sath samarthan chha 🙏😍🤝